Caucasian Mufudzi Imbwa: Ziva hunhu, mavambo uye hanya | Imbwa dzepasi rose
Caucasian Mufudzi Imbwa
Mhando dzese dzembwa dzine hunhu hwadzo. Hunhu hwepanyama uye hwepfungwa zvine hukama nezvose zviri zviviri magene ekushanduka uye basa ravakashandiswa. Iyo Caucasian Mufudzi Imbwa ndeyekuzvarwa, sekureva kwayo zita, kubva kuCaucasus nharaunda.
Nekuda kwemamiriro ekunze yakagadzira jasi rinokwanisa kuichengetedza kubva kumatambo akadzikira uye kukuvara kwakanyanya kwaungatambura kubva mukutengesa kwako kwekufudza. Ruvara rwayo rwemuviri rwakasimba kwazvo uye iri pakati pembwa hombe dziripo.
Kunyangwe paine mhando dzakasiyana dzembudzi dzeCaucasian imbwa dzine hunhu hwakafanana, parizvino rudzi rumwe chete runozivikanwa nezita rekuti Caucasian Mufudzi.
Iyo Russian Kennel Club inosarudza kushandisa shanduro yeRussia ye imbwa yemakwai Ovcharka, zita iro rudzi urwu rwakavewo rwakakurumbira mudunhu rekumadokero. Mufudzi weCaucasian chikamu chevatatu vanozivikanwa vevaRussia Vafudzi vanozivikanwa seSouth Russian Mufudzi uye Central Asia Mufudzi.
Kwakatangira iyi imbwa yakasarudzika kuchiri kusava nechokwadi uye zviri nani runyerekupe kuti mavambo erudzi urwu anotariswa muTibetan Mastiff imbwa. Chii chisingarambwe ndechekuti chakashandiswa kwenguva yakareba se mufudzi wemombe uye imbwa yemakwai nekuda kwechitarisiko chayo chinoshamisa, simba uye kupokana netembiricha yakaderera.
Yekutanga kutaridzika kwepamhando dzerudzi mune yekumadokero imbwa show yakatanga kusvika kuma30 kuGerman. Chokwadi ndechekuti irudzi rwekare rwekunoshamisa yehunhu hwakasiyana. Chaizvoizvo mavambo ayo anobva kunharaunda ine yakaoma hupenyu mamiriro, chinhu chakabvumidza iyo yakasarudzika yemazamu kukura kwerudzi.
Kurumwa kwembwa iyi kuri pakati peakanyanya kusimba mu canine world. Ichi chishandiso chikuru chinobatsira kwazvo kune yako hunoshamisa hunodzivirira hunhu uye wakatsiga hunhu.
Icho hachisi chaicho chipfuwo chenzvimbo dzese uye chero mhando muridzi. Vanhu vanosarudza kubereka rudzi urwu rwembwa vanofanirwa kuve neruzivo kwazvo nezve avo hunhu, kutarisirwa uye zvinodiwa. Kana iwe ukazvidzidzisa pachako nenzira kwayo uchave nekambani yakatendeka uye inodzivirira.
Nezve chitarisiko chembwa dzeCaucasian Mufudzi imbwa kana dzakasimudzwa nemazvo vane hutano uye vakagara kwenguva refu. Nezve kuumbwa kwavo, vane mapfupa akasimba uye miviri yemhasuru.
Mhuno nemhino zvakaumbana, nzeve dzayo dzakatenderera uye dzakarembera pamativi uye izvozvi zvinorambidzwa kucheka nzeve dzayo. Musoro wezvipfuyo izvi wakakura.
Sezvo ivo vachionekwa kunge imbwa hofori, zvinofanirwa kufungidzirwa kuti saizi yembwa idzi inowoneka. Nezve kukwirira, avhareji ndeye 70 masentimita. Zvisinei, pane musiyano pakati pemurume nemukadzi.
Kureba kushoma kwevanhurume ndiko 65 masentimita uye makumi matanhatu nemaviri echikadzi Kana iri yekukwirira kwepamusoro, hapana muganho wakatemwa. Hume ihombe uye inokwanisa kusvika pamasentimita makumi manomwe nemashanu vakadzi vacho makumi manomwe.
Nekuda kwesimba ravo rinoshamisa uye mhasuru, imbwa dzeCaucasian dzinorema. Vakadzi havatombodarika makumi mashanu kilos asi varume vanogona kuyera 70 kilos uye vanogona kutosvika makumi mapfumbamwe. Nezve uremu, iyo dimorphism yebonde yerudzi rwacho iri pachena.
Nezve jasi pane matatu marudzi, refu, pfupi uye nepakati bvudzi. Kune ese matatu marudzi bvudzi rakakora uye rakatsetseka. Ivo vane hunyanzvi hwekuve neakareruka ane mavara ane mvere undercoat anovadzivirira munzvimbo dzinotonhora.
Rudzi urwu rune makushe akasiyanasiyana akasiyana asi grey uye chena mavara ane furhu refu anotenderwa mumakwikwi. Iko kune zvakare mienzaniso yechitema ruvara uye mavara emoto uye chestnut matoni.
Ruzivo rwechinhu ichi nevaridzi rwakakosha uye nekuda kwebasa rakazadziswa nembwa iyi kwemazana emakore ichidzivirira nekutungamira zvipfuwo, ine hunhu hwehunhu hwemutungamiri. Nechikonzero ichocho, muridzi wayo anofanira kuzviisa iye semutungamiri wepakeji kuve alpha uye kune izvo unofanirwa kuve neruzivo.
Kune muridzi asina ruzivo, kurera chipfuwo ichave yakaoma nyaya, nekuti muridzi anofanira kuremekedza nekuteerera nekuratidzira kutonga pamusoro pemhuka. Kana izvi zvikaitika nemazvo chisungo chisingadambuke chichagadzirwa pakati pemuridzi uye chipfuwo.
Kunyangwe izvi zvichiitika zvinobudirira, zvinofanirwa kuzivikanwa kuti iyo Caucasian Mufudzi imhuka ine hunhu hwakasimba uye kana iye kana mhuri yake ikaonekwa iri panjodzi, achaita sezvaanoona zvakakodzera kuchengetedza dunhu rake.
Neichi chikonzero, zvakakosha kuti vanhu avo vasina hukama nemhuka vagare kure uye vasakanganwe kuti vakatarisana nekurumwa zvine simba. Hukama hwemhuka dzinovaraidza nevana hwakanyanya husingakuvadzi vachifunga hunhu hwavo ivo havavatore kunge vane njodzi uye saivo varidzi.
Zvakakosha kwazvo kuti mhuka idzi hadzirererwa nemhirizhonga, haufanire kukurudzira hunhu hwesango zvachose. Vanogona kuteerera, asi hunhu hwavo hunoshamisa hwekudzivirira hunofanira kuremekedzwa. Pakati pemabasa ekufudza, mufudzi mumwe weCaucasus anokwanisa kubata mapere maviri anorwisa boka.
Pasinei nekurema uye mhasuru, anokurumidza kushamisika uye anokurumidza uye mvere dzadzo hadzingodziviriri kubva kumamiriro ekunze asiwo kubva pakurumwa, sezvo kuva gobvu kunoita kuti zviomere meno emuvengi kuti asvike paganda.
Hazvigone kurambwa kuti imbwa yeCaucasus ine mukurumbira wekuita zvechisimba asi rakawanda rezita iri rakawanikwa nekusaziva kwerudzi urwu, kuve mudziviriri mukuru wemhuri yake. Inoita izvo zvakapihwa kwairi uye inozadzisa basa rayo zvinobudirira.
Chinhu chakakosha ndechekuti vanoda nzvimbo yekushandisa simbaIvo vakadzikama uye vanozvimirira uye vanongoerekana vauya kana zvasvika pakushamwaridzana nemamwe marudzi. Ndokureva, haisi imbwa yemuguta nekuti munzvimbo dzeguta inogona kukudziridza zvishoma zvakanaka zvehunhu hwayo.
Kunyangwe iyi mhuka iri hutano hwakanaka uye isina zvirwere zvekugara nhaka kana inobatwa nezvirwere zvemarudzi makuru.
Zvakakosha kutevera mirairo yechiremba wezvekuita maererano nechikafu chavanofanira kutevedzera pamwe nekudzivirira zvirwere zvakaita se hudyu, gokora uye nemoyo dysplasia. Iyo yekupedzisira inokanganiswa zvakanyanya nekudya kwemhuka, saka kufutisa uye kufutisa kunofanirwa kudzivirirwa.
Pakati pekuchengetwa kwemazuva ese, majekiseni haafanire kuregeredzwa uye zvakare zvakakosha kuikwesha nechiridzwa chakakodzera kaviri pasvondo. Nekuda kwekudyidzana kwayo nemasikirwo, kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa panguva yakakodzera kunofanirwa kutorwa kune chero rudzi rwezvipembenene.
Iwe unofarira rudzi urwu rwembwa here? Titevere uye iwe uchawana rumwe ruzivo nezve izvi uye mamwe marudzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Caucasian Mufudzi Imbwa
Ini handisi kuzoumburuka. Imbwa yangu yakaita tsaona diki uye hudyu yake yakabatwa. Takaita kurapwa kwakasiyana uye iye akavandudzika uye panguva imwechete aive akaipa zvakare uye ikozvino anga agara kwemwedzi mishoma kubva pandakamupa mascosana cissus.
Izvi hazvishamise, kunyangwe vet akashamisika.
Lourdes Sarmiento akadaro
Isu tinofara kwazvo, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti vet anogara ari iye ega anogona kusarudza zvekupa kana kwete kumhuka.
Pindura Lurdes Sarmiento
Isu tinofara kwazvo, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti inofanirwa kuve iyo chiremba uyo anogara achitiudza kuti anofanirwa kana haafanire kutora chipfuwo chedu.
Chii chinonzi Ultra Levura uye ndechei?